नजिक न्युज | ‘कोरोना फाइटर’ डा. नितु भन्छिन्– हामी नलडे को लड्छ ?
चितवन : २९ वर्षे युवावस्था । झट्ट हेर्दा कसैले पनि भन्दैन कि डा. नितु अधिकारी कोभिड विरुद्धको युद्धकी कमाण्डर हुन् । तर, डा. अधिकारी नै हुन्, चितवनको भरतपुरमा स्थापना गरिएको भरतपुर कोभिड १९ ल्याबकी ‘क्याप्टेन’ ।
टेकुको केन्द्रीय प्रयोगशालासँगको समन्वयदेखि भरतपुर अस्पतालका पदाधिकारीहरुसँग निरन्तर संवाद, छलफल, योजना बनाउने काममा समेत उनको दिन बित्छ । यसबाहेक हिजोआज उनको टाउको दुखाइको अर्को विषय बनेको छ, विना जानकारी विभिन्न जिल्लाबाट पठाइने स्वाब । सरकारले तोकिदिएको निर्देशिका र गाइडलाइनभन्दा बाहिर गएर स्वाबहरु संकलन गरी पठाउने र छिटो परीक्षणका लागि दबाव दिने क्रम बढेकाले उनी हैरान छिन् ।
बिहिबार ११, असार २०७७ ०८:३९ मा प्रकाशित